Uphengululo lweHuawei P10, uHlaziyo olunezimpawu kunye nezimvo | I-Androidsis
IHuawei P10, uhlalutyo kunye noluvo
UAlfonso de Frutos | | Reviews
Huawei ayisihlisi inqanaba. Ngokuchasene noko. Ngo-2016 basothusa ngee-terminals ezimbini ezigqibeleleyo: iHuawei P9, isiphelo sokuqala sophawu esineenkqubo zekhamera ezimbini ezisayinwe nguLeica, kwaye kamva iHuawei Mate 9, isixhobo esibe yeyona ndlela ilungileyo. ukukhangela i-phablet ephezulu.
Ngoku, emva kweenyanga ezimbini zokusebenzisa, lixesha lokuba ugqibezele Uhlolo lweHuawei P10, Iflegi entsha yomvelisi waseAsia eboniswe kuhlobo lokugqibela lweMWC kwaye indishiyile iimvakalelo ezilungileyo kakhulu emva kokuzama.
1 Uyilo oluguqukayo ngelixa ligcina iDNA yeHuawei
2 Inzwa yeminwe ekhanyayo ngokusebenza kwayo kunye nokusebenza kwayo
3 Isikrini esihle esenza umsebenzi, kodwa ngaphandle kwesisombululo se-2K
4 Ibhetri enkulu enenkqubo yokutshaja ekhawulezayo enomtsalane
5 Umsebenzi omkhulu nge-EMUI 5.1
6 Ikhamera yokukhuphisana neyona inkulu
7 Iifoto zegalari ezifakwe ngekhamera yeHuawei P10
8 Izigqibo zokugqibela
9 Igalari yomfanekiso weHuawei P10
Uyilo oluguqukayo ngelixa ligcina iDNA yeHuawei
Kuqhelekile ukuba xa umenzi esenza ilayini yoyilo, igcina ezi curve kwezi nguqulelo zilandelayo zemveliso, ngaphandle kokubeka emngciphekweni kakhulu kwaye yomeleze esele isebenza. Kwaye uHuawei ngumzekelo ocacileyo.
Akunzima ukuqaphela isiphelo sendalo ngophawu lwamehlo kwaye IHuawei P10 inokufana okucacileyo kunye nomanduleli wayo. Kodwa, ngaphandle kokufana, zininzi iinkcukacha ezibonisa uguquko olucacileyo.
Kwelinye icala sinayo macala e-chassis, ngoku egobile ngakumbi. Enye inkcukacha ephawulekayo ifunyenwe kwi-bezel yangaphambili eyahlula isikrini kwi-chassis kwaye epholileyo ngakumbi kwaye ifihliweyo, inika umnqweno obalaseleyo kwisiphelo.
Kwaye uthini malunga nalaa mphambili ume ngaphandle ngokuba ne umfundi weminwe kwimilo yoxande ejikeleziweyo. Kutheni le nto uHuawei ekhethe umphambili wokubandakanya inzwa yebhayometri endaweni yokuqhubeka nokubeka ngasemva? Ngokulula ukuze i-terminal ilunge ngakumbi.
Enye yeenkcukacha endizithandayo kakhulu yeyayo Umzimba owenziwe nge-chassis yealuminium enesicacic texture texture ngasemva enika i-terminal ukubamba okumnandi kakhulu Esandleni kwaye uziva kakhulu.
Enye inkcukacha ephawulekayo esiyibonayo ngasemva. Njengoko benditshilo, uHuawei uthathe isigqibo sokubeka inzwa yeminwe ngaphambili ukuze kwindawo apho inzwa ye-biometric ye-P9 ibekhona ngoku siza kubona ilogo yophawu.
Los amacala asecaleni mancinci kakhulu, kodwa apha uHuawei uthathe ithuba lokuncipha okuncinci kwe-2.5 D ukunika imeko yesiphelo ngaphandle kwayo nayiphi na imiphetho, nangona kule meko siqaphela isakhelo esincinci esenza ukuba kucace ukuba la macala emacaleni akhona, nangona engaphazamisi Isiphelo sendlela nangaliphi na ixesha.
Njengakwimodeli edlulileyo, iHuawei P10 unesinxibelelanisi sohlobo C lwe-USB imi emazantsi, ecaleni kwesiphumo se-3.5 mm yeefowuni kunye negrille yesithethi.
Kwicala lasekunene sifumana iqhosha lokucima nokucima ifowuni kunye nolawulo lwevolumu. Qaphela ukuba iqhosha lamandla linebhendi epinki yentsimbi eyenza ukuba ibonakale kakhulu kwifowuni. Iinkcukacha endizithandayo ngokobuqu. Onke amaqhosha anikezela ngaphezulu kokuhamba ngokuchanekileyo kunye nokumelana noxinzelelo.
Kwindawo ephezulu sifumana isokethi yemakrofoni, ngelixa icala lasekhohlo kulapho indawo ye-nano SIM khadi kunye nenye ikhoyo ikhadi le-SD elincinci.
Kudala ndisebenzisa iHuawei P10 kangangenyanga kwaye iimvakalelo bezintle kakhulu: ifowuni ikhululekile kwaye iluncedo, iziva ilungile esandleni kwaye ikhupha umgangatho kuyo nayiphi na pores yayo. Ngokungafaniyo nemodeli yangaphambili, ayityibilikisi ngaphandle kokubhitya kwayo kwaye ukuba ijika elibonakalayo emacaleni lenza kube lula ukumbamba. Ngamafutshane, umsebenzi owenziwe nguHuawei kule meko awunakuthelekiswa nanto.
Inkqubo yokusebenza I-Android Nougat 7.0 phantsi kwe-EMUI 5.1 yomsebenzisi
Isikrini 5.1 "IPS enesisombululo esipheleleyo se-HD kunye neCorning Gorilla Glass 5 Protection
Inkqubo I-Kirin 960 Octa Core kwi-2.3 Ghz isantya sewotshi esiphezulu
GPU IMali G71
i-ram I-4Gb ye-RAM LPDDR4
Ukugcinwa kwangaphakathi I-64 GB iyandiswa ngokusebenzisa imemori khadi
Ikhamera esemva I-Leica 20MP kunye ne-12MP yokujolisa kwelensi ezimbini kunye neDual LED Flash
Ikhamera yangaphambili 8MP Leica
Conectividad Isizukulwana esilandelayo se-LTE-4 × 2 i-Wi-Fi MIMO (ii-eriyali ezi-2) zokugubungela isantya esiphezulu ngaphandle kwamacingo- iBluetooth- iGPS kunye ne-aGPS-OTG-izibuko lohlobo C lwe-USB
Ezinye izinto Inzwa yeminwe ngaphambili kunye ne-IP67 yamanzi kunye nothuli
Ibhetri I-3200 mAh ene-Huawei Super Charge itekhnoloji ye-smart
Ubukhulu X x 145.3 69.3 6.96 mm
U bunzima I-145 gram
Ixabiso 530 Iiyure kwiAmazon
Nge-P9, iimvakalelo ezikweli candelo zazintle kakhulu kwaye, kuthathelwa ingqalelo ukuba i-P10 izuza njengelifa iprosesa kwi-Huawei Mate 9, kuyacaca ukuba iya kuba sisilo. Kwaye kunjalo.
I-Kirin 960 yiprosesa enamandla ye-octa-core eyenziwe nge-nanometer ye-16 ye-FinFET Plus kwaye inenkxaso yodidi lwe-LTE 12. Kule nto kufuneka songeze iMali G71 GPU yayo enamandla kunye ne-4 GB yememori ye-RAM esisixhobo kunye nomsebenzi oncomekayo .
Kudala ndivavanya imidlalo eyahlukeneyo kunye nokusetyenziswa okufuna umthwalo omkhulu wemizobo kwaye i-terminal iphendule ngokugqwesileyo, indivumela ukuba ndiyonwabele eyona midlalo iphambili ngaphandle kokubandezeleka okanye ukumiswa, into elindelweyo kwisiphelo soluhlu.
Qaphela ukuba, nangona iHuawei P10 ingenakufakwa emanzini, inokuchasana nokutshiza ngokuba nomaleko okhuselayo kuwo onke amacandelo. Andiqinisekisi ukuba i-P10 iyakumelana nokudada echibini, kodwa bendihlala ndisebenzisa ifowuni xa kukho imvula enkulu kwaye isebenza ngokugqibeleleyo, ukuba nje indawo engezantsi ayimanzi, apho onke amanqaku angenayo kwisiphelo zibekwe, awunakukhathazeka ukuba i-terminal ifumana imanzi kancinci.
Inzwa yeminwe ekhanyayo ngokusebenza kwayo kunye nokusebenza kwayo
Woluvo Iminwe ye-Huawei P10 yenye yezimanga ezinkulu. Kwaye hayi ngenxa yokuba ibekwe ngaphambili, nayo, kodwa ngenxa yokusebenza okungathethekiyo okunikwa ngumfundi webhayometriki.
Kwaye iHuawei ijika inzwa ibe sisitshixo sokudibanisa esidityanisiweyo esibuyisela amaqhosha esiqhelo esoftware. Ngokwam ndiyathanda ukubona amaqhosha kwaye ndikhethe ukusebenzisa le nkqubo, kodwa ndiyayithanda ingcinga yokuba nako ukwenza enye okanye enye indlela ngokuxhomekeke kukhetho lomntu ngamnye.
Umfundi uwufezekisa ngokugqibeleleyo umsebenzi wakhe, ebonelela ngokuchanekileyo okumangalisayo. Ndihlala ndisithi abafundi beminwe kaHuawei zezona zibalaseleyo kwintengiso kwaye yeHuawei P10 ngumzekelo omtsha woku.
Ukubuyela kumxholo wokusebenzisa amaqhosha esoftware okanye ukwenza uninzi lweqhosha elisezantsi lojongano, yitsho njalo inzwa yeminwe yeminwe iba yinto enye yokuhamba ujongano. Ngokuchukumisa ukukhanya siya kwenza ngokulinganayo ngokucinezela i «Emuva» isitshixo, ukuba sigcina umnwe wethu ucinezelwe ixesha elide siza kusebenzisa iqhosha le «Ekhaya» kwaye ukuba sityibilika umnwe wethu ngasekhohlo okanye ngasekunene kwenzwa iya kuvula imo yokwenza imisebenzi emininzi.
Uluvo endingalusebenzisanga kakhulu kuba ndiqhelekile ngokwesiko kodwa uninzi lwabasebenzisi luya kuluthanda. Ukuba songeza kuloo mfundi webhayometrikhi eyamkela iminwe yakho ngalo mzuzu, phambi kwethu kukho olona luvo lubalaseleyo lweminwe, ukuba ayilunganga, kwintengiso.
Isikrini esihle esenza umsebenzi, kodwa ngaphandle kwesisombululo se-2K
Kwicandelo lesikrini asifumani lutshintsho lukhulu kakhulu xa kuthelekiswa nengaphambili. U-Huawei uyaqhubeka nokubheja kwiipaneli IPS 25D Banikezela ngenqanaba elihle lokuqaqamba nokungafani.
Iimpawu zayo ze-5.15-intshi ediagonal Isisombululo esipheleleyo seHD ukubonelela ngomgangatho obonakalayo obonakalayo, okhuphisana neepaneli ze-AMOLED ngokubhekisele kumbala we-vibrancy, impumelelo ekufuneka ithathelwe ingqalelo.
Ngapha koko, inyani yokuba uHuawei akakhethanga ipaneli ye-2K iyandicofa kancinci. Makhe ndichaze: umahluko phakathi kwepaneli yolu hlobo kunye nesikrini esipheleleyo se-HD sokusetyenziswa kwemihla ngemihla kuncinci, kuba ukubona oonobumba kucace kancinci, kodwa kungaphezulu.
Kodwa ukungena kwifayile ye- Itekhnoloji yeVR apha izinto ziyatshintsha. Olu hlobo lomxholo alunanditshwa ngokufanayo, kude nalo, ngesikrini esigcweleyo se-HD kunesikrini se-2K. Kwaye inyani yokuba uGoogle uneqonga lakhe, iDaydream, bekufanele ukuba umenzi acinge ukubheja kwimixholo yenyani yokwenyani.
Lumka, ndiyicacisa gca ukuba isikrini siyamangalisa, kodwa ngekhe sikwazi ukusebenzisa ifowuni efana neHuawei P10 ukujonga umxholo okwenyani kwaye iyandiphoxa.
Ibhetri enkulu enenkqubo yokutshaja ekhawulezayo enomtsalane
Ndikunye noMlingani 9 basothusile ngokubonisa inkqubo ebiza i-terminal ngexesha lokurekhoda kunye ne-Huawei P10 baphinde babheja kule teknoloji. Intlawulelo enkulu, esebenza kakuhle.
La I-3.200 mAh ibhetri ngaphezulu kokwaneleyo ukuxhasa ubunzima obupheleleyo bezixhobo zetheminali. Kuvavanyo lwam, kusetyenziswa kakhulu, ndifikelele esiphelweni sosuku ibhetri ijikeleza malunga ne-20-30%. Ukusetyenziswa okuphakathi kuye kwahlala usuku olunesiqingatha ngaphandle kwengxaki.
La manani sele elungile, kodwa xa sidibanisa inkqubo ebiza ama-50% ebhetri kwimizuzu engama-30, sinomdibaniso onomtsalane ngokwenene.
Umsebenzi omkhulu nge-EMUI 5.1
Andizithandi izaleko zesiko. Kum, i-Android emsulwa yeyona ndlela ilungileyo kwaye emva koko abasebenzisi baya kufaka i-launcher ukuba bafuna. Kodwa kufuneka nditsho ukuba iinguqulelo zamvanje ze-EMUI zindithandile kwaye nazo EMUI 5.1 IHuawei ikwazile ukufezekisa umgangatho olungileyo kunye namava omsebenzisi.
Uluhlu lwesiko analo iHuawei P10, yiyo isekwe = Android 7.0 Nougat, Inguqulelo yamvanje yenkqubo yokusebenza kaGoogle, into enokulindelwa kwisiphelo esiphakamileyo. Utshintsho xa kuthelekiswa neenguqulelo ezidlulileyo lunomdla kakhulu, umzekelo, sinokuvula idrowa yesicelo, efanelekileyo ukuba awuyithandi inkqubo yedesktop yomaleko we-EMUI 5.1.
La Uninzi lweeapps kunye neempawu zicofwe kathathu kude Kulula kakhulu kwaye kulula ukufikelela kulo naliphi na icandelo lesiphelo. Gqabaza ulawulo lwayo lwemisebenzi emininzi, ukuba ucofe iqhosha kwiqhosha elihambelanayo, siya kuthi sikwazi ukufikelela kwinkqubo "yamakhadi" esinokubona ukuba zeziphi izicelo esivulekileyo kuzo.
Njengeemodeli zangaphambili, iHuawei P10 inokukhetha yenza izijekulo ezahlukeneyo ngamaqhina akho ukuthatha ii-skrini okanye ukwenza ukusebenza kwescreen okuza kusivumela ukuba sisebenzise usetyenziso olunye ngaxeshanye kwiscreen esinye.
Gqamisa loo keyboard Swiftkey Kuza umgangatho kwisiphelo sendlela ukubhala ngale Huawei P10 kuluvuyo lokwenene. Kwaye kugxininiswa ngokukodwa kwimowudi "yamawele", eyona nto inomdla kwi-EMUI 5.0 kwaye esivumela ukuba sisebenzise inkonzo efanayo, enje ngeWhatsApp okanye iFacebook, eneeprofayile ezimbini. Ilungele abo bantu banenombolo yobuqu nenombolo yobungcali kwaye abangafuni ukuphatha iifowuni ezimbini ngaxeshanye.
Ujongano olutsha lukaHuawei lubonisa iqonga lobukrelekrele ubugcisa yeyakho efunda ngokusetyenziswa kwesixhobo, ukuziqhelanisa neemfuno zethu kunye nokwenza umsebenzi ongcono.
Ikhamera yokukhuphisana neyona inkulu
Icandelo lekhamera yenye yezinto eziphambili zeHuawei P10 entsha. Ukuqhubeka nokubheja kwi inkqubo lens ezimbini Icacisa injongo yomenzi ukomeleza ubudlelwane bayo kunye Leica. Kwaye iziphumo ezizuziweyo bezintle ngokwenene.
Ukuqala, inenzwa yokuqala enesisombululo see-megapixels ezingama-20 kunye nendawo ekugxilwe kuyo f 2.2 eqokelela ulwazi lwe-monochrome (ngombala omnyama nomhlophe). Kwelinye icala sifumana inzwa yesibini ye-12 megapixel ene-focal aperture efanayo nehambisa imifanekiso yombala.
Zombini iilensi ziyimodeli Leica Isishwankathelo - H 1: 2.2 / 27 esele siyibonile kwiHuawei P9 kunye neP9 Plus. Iziphumo zolu dibaniso zenza ukuba imifanekiso ifakwe ngombala okanye emnyama namhlophe ifikelele kwii-megapixels ezingama-20. Icebo lilele ekusetyenzisweni kwemifanekiso njengoko iHuawei P10 ixuba imifanekiso efakiweyo ngombala nakwimodi ye-monochrome yokuguqula imibala yokwenza umfanekiso wokwenene ongu-20 megapixel.
Ugxininiso olukhethekileyo kwinto emangalisayo isiphumo bokeh Oku kufezekiswa ngekhamera ephindwe kabini yesiphelo kwaye yenziwe isebenze kwiparameter eyandisiweyo yokuvula kwifowuni yekhamera yeefowuni. Iifoto ezifakwe ngale ndlela ziyamangalisa kuba, yakuba nje ithathiwe, sinako ukwahlula ubunzulu bentsimi yefoto enkosi kwisoftware yayo yokuqhubekeka.
Kwaye isoftware inceda kakhulu kule nkalo. Inkqubo yekhamera yeHuawei P10 inenani elikhulu lokucoca ulwelo kunye neendlela eya kuvuyisa abathandi bokufota. Ngokukodwa imo ye-monochrome yokuthatha iifoto ezimnyama kunye ezimhlophe ezimangalisayo. Kwaye asinakulibala imowudi yobuchwephesha eya kukuvumela ukuba utshintshe ngesandla iiparameter ezahlukeneyo zekhamera, ezinje ngokujolisa okanye ibhalansi emhlophe, esiba sisixhobo esifunekayo kwiingcali kwicandelo lokufota. Ewe qiniseka ukuba unako gcina imifanekiso kwifomathi yeRAW.
Ukutsho oko isantya esigxile kwikhamera P10 ilungile ngenene, Ukubonelela ngokubamba ngokukhawuleza okukhulu kunye nomgangatho. Emva kwexesha ndiza kukushiya uthotho lweefoto ezithathwe kunye nefowuni ukuze ubone ukuba kunokwenzeka.
Los imibala ibonakala ibukhali kakhulu kwaye icacile, ngakumbi kwiindawo ezinokukhanya okuhle, nangona indlela yayo yokuziphatha kwiifoto zasebusuku indothusile. Ndifuna ukugxininisa ukuba imizobo eyenziwe ngeekhamera inikezela ngokwenyani ngendlela ethembekileyo.
Imifanekiso efunyenwe nge-P10 zinomtsalane kwaye inyani yokuba nakho ukudlala ngesiphumo se-bokeh inika inqaku elinomdla kakhulu. Ungayichazanga into yokuba sinokurekhoda kwifomathi ye-4K kwizakhelo ezingama-30 ngomzuzwana.
IHuawei ibinobunzima bokufumana iSamsung malunga noku kwaye, ithathela ingqalelo ukuba ikhamera ye-P10 ivumela ukuthatha iifoto ngeziphumo ezingaphandle kokugxila ezibanika inkangeleko eyodwa, ndikhetha ikhamera yomenzi waseAsia.
Iifoto zegalari ezifakwe ngekhamera yeHuawei P10
IHuawei ikhule njengogwebu kule minyaka imbalwa idlulileyo. Umvelisi waseAsia ubuthathile ubunkokheli beSamsung malunga nentengiso ye-smartphone eSpain nase Andicingi ukuba kuya kuthatha ixesha elide ukuthatha indawo yokuqala emhlabeni
Ukubona izindululo ezinje nge Huawei P10, Isiphelo esothusayo sokukwazi ukukhuphisana ukusuka kuwe ukuya kuye nakweyiphi na intengiso ephezulu kwaye unokufumana IAmazon ye-530 euro, kuyacaca ukuba ngubani, ubuncinci ngokwexabiso lemali, nehashe eliphumeleleyo.
Igalari yomfanekiso weHuawei P10
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » IHuawei P10, uhlalutyo kunye noluvo
Inqaku elihle! Kugqityiwe kakhulu, ngalo lonke ulwazi.
enkosi kakhulu ngenkxaso 😉
Izixhobo ezibiza kakhulu kune-smartphone uqobo?
Ngaba ufuna iXiaomi enexabiso eliphantsi? Ungaphuthelwa kwezi zivumelwano zeBanggood